किन हडबडाइन् स्वस्तिमासँगको सम्बन्धबारे पुजा? – Khabar Silo
किन हडबडाइन् स्वस्तिमासँगको सम्बन्धबारे पुजा?
नेपाली फिल्म उद्योगमा बेला–बेला कलाकारले लिने पारिश्रमिकको विषयले राम्रै चर्चा पाउँछ।केही समयअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले कलाकारले लिने पारिश्रमिकबारे अभिव्यक्ति दिइन्। उनले भनेकी थिइन्, ‘गम्भीर भएर भन्न चाहन्छु, २० लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक लिन्छु भने मैले ५० लाखको काम दिन सक्नुपर्छ। २० लाख, १५ लाख पारिश्रमिक लिएर नाकमात्र बढाउनेभन्दा पनि त्यति रकम लिएपछि निर्माताको हातमा ५ लाख मात्र पर्‍यो भने त्यो राम्रो हुँदैन।’
संयोग या नियोजित, स्वस्तिमाको अभिव्यक्ति अभिनेत्री पुजा शर्मालाई भारी पर्‍यो। कारण थियो, त्यसको केही समयअघि मात्र पुजाले फिल्म ‘पोई पर्‍यो काले’का लागि रु २० लाख पारिश्रमिक लिएको खवर बाहिरिएको थियो।
उक्त अभिव्यक्तिले पुजालाई मात्र नभएर स्वस्तिमा आफैंलाई पनि आलोचित बनाएको थियो। त्यसबेला स्वस्तिमा पुजाको प्रसंशकहरूबाट धेरै नै आलोचित बन्न पुगेकी थिइन्।
त्यसयता नेपाली फिल्म बजारमा पुजा र स्वस्तिमाको सम्बन्ध उति राम्रो नभएको मानिन्छ। यति हुँदाहुँदै आउँदो कात्तिक ८ गते पुजा र स्वस्तिमा अभिनित भिन्न–भिन्न फिल्म एकसाथ हल प्रवेश गर्दैछन्। फिल्म हुन् पुजाअभिनित ‘पोइ पर्‍यो काले’, र स्वस्तिमा अभिनित ‘घामड शेरे’।
नेपाली फिल्म बजारमा २ वा ४ वटा फिल्म एकसाथ प्रदर्शनमा आउनुलाई नयाँ विषय मानिदैन। तर, पारिश्रमिक विवादमा मुछिएका दुई अभिनेत्रीका फिल्म एकसाथ आउनुलाई भने कतै एक अर्काको दुस्मनीको पराकास्टा हो कि भनेर आँकलन गर्नेहरू पनि देखिएका छन्।
यसै सन्दर्भमा अभिनेत्री पुजा शर्माले भने अभिव्यक्ति दिएकी छन्। फिल्म ‘म यस्तो गीत गाउछु’को सुटिङ सेटमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पुजाले दुस्मनीको कारणले फिल्म जुधाएको भन्ने आँकलनप्रति कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहिनन्।
पारिश्रमिकको विषय हुँदाहुँदै एकैदिन फिल्म प्रदर्शन हुन लाग्नु संयोग भएको तर, अरुको आँकलनमै आफूले प्रतिक्रिया दिन उचित नहुने पुजाको भनाइ छ।
‘स्वस्तिमा र म एउटै फिल्डका अभिनेत्री भएकाले सबैको फिल्म राम्रो चल्नु पर्छ। यदि दुस्मनीकै कारण फिल्म जुधाईएको हो भने त्यो सबैलाई घाटाको विषय हो,’ पुजाले भनेकी छन्।
पुजाले स्वस्तिमासँगको सम्बन्धका बारेमा केही हड्बडाएको भावमा कुरा थपेकी छन्,‘स्वस्तिमासँग मेरो नराम्रो पनि कहिल्यै भएको छैन, राम्रो पनि कहिल्यै भएको छैन। हामीबीच चिनजान छैन पनि भन्न मिल्दैन। किनकि हामी एउटै क्षेत्रका मान्छे हौं। धेरै गफ पनि भएको होइन। धेरै मिल्ने भन्ने पनि होइन। सामान्य मान्छे जस्तै हाइ–हेल्लो जस्तो मात्र हो।’
पहिलो लोकस्टारको उपाधि सनी विश्वकर्मालाई
८ कात्तिक, काठमाडौं । आईएमई लोकस्टारको उपाधि सनी विश्वकर्माले जितेका छन् । उनले लोक स्टारको फाइनल राउण्डको तीन प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै नगद ५० लाख रुपैयाँ नगद र २५ लाख बराबरको सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको जीवन विमा पुरस्कार जितेका हुन् । त्यस्तै चेतन गोतामे रनर अप बनेका छन् । उनले २५ लाख रुपैयाँ नगद र सिटिजन लाइफ […]